पटक-पटक पिसाब किन आउँछ ? कारण जानिराखौ - ज्ञानविज्ञान
धेरै पानी वा तरल पदार्थ पिएको बेला पिसाब लाग्छ, जो स्वभाविक हो । तर, कहिले कहिं पटक-पटक पिसाब लाग्छ । यसको एउटा मात्र कारण हुँदैन । तर, सामान्य अवस्थामा पटक-पटक पिसाब लाग्छ भने, त्यसले शारीरिक समस्याको संकेत गर्छ । के भनिन्छ भने, पिसाब कति पटक फेरिन्छ भन्ने कुराले समेत हामी कति स्वस्थ्य वा अस्वस्थ्य छौ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्छ । हाम्रो जीवनशैली वा स्वास्थ्य खराब भएमा पटक-पटक पिसाब लाग्न सक्छ ।
Topics #कारण #पिसाब
Don't Miss it गर्मीमा घरलाई सितल राख्न यी तरिका
Up Next घरमा भएको मसलाको सुरक्षा यसरी गर्नुहोस् जसले स्वाद जोगाइराख्छ
शास्त्रका अनुसार यी हुन् शरीरबाट हुने महापाप
वाणीबाट हुने पहिलो पाप व्यर्थको कुरा गर्नु हो । अर्को पाप निष्ठुर अर्थात् कठोर कुरा गर्नु हो । यस्ता कुराले…
के के खानेकुरा खाँदा गोरो भइन्छ ? थाहा पाउनुस
नरिवल पानी- नरिवल पानीमा हुने ईलेक्ट्रोलाईट्सले हामीलाई गोरो हुन मद्दत गर्छ । रातो मूला- रातो मूलामा हुने आईरनले हाम्रो अनुहारमा…
रेबिज सर्ने तरिका, लक्षण र उपचार विधि
रेबिज (अङ्ग्रेजी: Rabies) पशुबाट मानिसमा सर्ने रोग हो। चरा र स्तनधारी प्राणीहरूमा मात्र असर गर्ने यो रोग जंगली जनावरहरू जस्तै…
भर्खरै गरिएको एक अध्ययन अनुसार सनस्क्रीनको अत्यधिक प्रयोग गर्ने पुरुषमा नपुंसकता हुन सक्ने सम्भावना बढी हुनसक्छ । सनस्क्रीनमा प्रयोग भएको…